ဓါတ်ပုံ အဟောင်းတွေနဲ့ ဖြန့်ဝေထားတဲ့ တိုက်ပွဲ သတင်း
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေနဲ့ ဖြန့်ဝေထားတဲ့ တိုက်ပွဲ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
| 16 March 2021 9:59 AM GMT
အဆိုပါ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေကို Min Min Oo ဆိုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က မတ်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၂ နာရီ ၁၃ မိနစ်မှာ ဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့အတူ "8. 3. 2021 ရက်နေ့ ( 10..30..အချိန်မန်းလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းတွင် အသင့်စောင့်နေသော KIA. မှမအလကား တစ်စီးနဲ့ လော်ဘီသုံးယောက် လက်နှက်ခဲရမ်းများ နင့်အတူ သိမ်းဆဲ လိုက်ကြောင်း သရပါသည်" (သတ်ပုံ မူရင်းအတိုင်း) လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဖေ့စ်ဘွတ်ပိုစ့်မှာ ဓါတ်ပုံ ၃ ပုံ ပါဝင်ပြီး ပထမ ဓါတ်ပုံမှာ စစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတဲ့ တရုတ် Faw ကား တစ်စီး မီးလောင်နေတဲ့ ပုံဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယပုံမှာ လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ စစ်သား ၃ ဦး ဖမ်းခံထားရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တတိယပုံမှာ သိမ်းဆည်းရမိထားတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို အခင်းတစ်ခုပေါ်ချပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းအမှားကို Like လုပ်ထားသူ ၁၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ ထပ်ဆင့်ဝေမျှထားသူ ၅ သောင်းနီးပါး ရှိနေပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး စစ်သား ၃ ယောက်နဲ့ လက်နတ်တွေ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Boom Myanmar က အချက်အလက် ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေနဲ့ ဖြန့်ဝေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပထမဆုံး စစ်ကား မီးလောင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ လကုန်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ TNLA အဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်က ဓါတ်ပုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်သား ၃ ယောက် ဖမ်းခံထားရတဲ့ ပုံဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားစဉ်က ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ ဓါတ်ပုံဟာလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်ခန့်က ဓါတ်ပုံ အဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံတွေဟာ ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေသာ ဖြစ်ပြီး ဒီရက်ပိုင်းထဲ စစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့ ပုံတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
Claim : လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဖြန့်ဝေထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး စစ်သား ၃ ယောက်နဲ့ လက်နတ်တွေ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Boom Myanmar က အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါတယ်။
Fake news Military convoy old photos Coup ဓါတ်ပုံအဟောင်း စစ်တပ် KIA သတင်းအတု